24 Zvino kwapera mazuva mashanu mupristi mukuru Ananiyasi+ akaburuka nevarume vakuru nomutauriri wevanhu vose, mumwe munhu ainzi Teturo, vakamhan’arira+ Pauro kuna gavhuna.+ 2 Paakashevedzwa, Teturo akatanga kumupomera, achiti: “Zvatiine rugare rukuru+ nokuda kwenyu uye kuti murudzi runo zvinhu zviri kuchinja nokuda kwokunyatsofunga kwenyu, 3 tinozvigamuchira nokuonga kukuru nguva dzose uyewo munzvimbo dzose, Haiwa Changamire+ Ferikisi. 4 Asi kuti ndirege kukudzivisaizve, ndinokukumbirai kuti mutinzwe kwenguva pfupi nomutsa wenyu. 5 Nokuti takawana murume uyu ari munhu anonetsa kwazvo+ uye achiita kuti pave nokumukira+ pakati pevaJudha vose munyika yose inogarwa uye ari mutungamiriri wekapoka kevokuNazareta,+ 6 uye uyo akaedzawo kusvibisa temberi,+ tikamubata. 7 —— 8 Imi munogona kumubvunzurudza monzwa kwaari pamusoro pezvinhu izvi zvatiri kumupomera.” 9 Naizvozvo vaJudha vakapindirawo mukudenha kwacho, vachitaura kuti zvinhu izvi zvakanga zviri izvo. 10 Pauro paakanongedzerwa nomusoro nagavhuna kuti ataure, akapindura kuti: “Zvandinonyatsoziva kuti mave muri mutongi worudzi urwu kwemakore mazhinji, ndinotaura nokuzvidira ndichizvidzivirira+ pazvinhu zvine chokuita neni, 11 imi zvamunogona kuwana kuti haapfuuri mazuva gumi nemaviri kubvira pandakakwira kuJerusarema kunonamata;+ 12 uye havana kundiwana ndiri mutemberi+ ndichiita nharo nomunhu kana ndichiita kuti mhomho yevanhu+ iungane mumasinagogi kana muguta rose. 13 Uyewo havagoni kukupai uchapupu+ hwezvinhu zvavari kundipomera iye zvino. 14 Asi ndinobvuma izvi kwamuri, kuti, maererano nemanamatiro avanoti ‘kapoka’ saizvozvi ndiri kuitira Mwari wemadzitateguru angu basa dzvene,+ zvandinotenda zvinhu zvose zviri muMutemo+ nezviri mune Zvakanyorwa nevaprofita; 15 uye ndine tariro+ kuna Mwari, tariro iyo varume ava vanayowo, kuti kuchava nokumuka+ kwevakarurama+ nevasina kururama.+ 16 Chokwadi, ndiri kuedza nguva dzose pana izvozvi kuti ndizive+ kuti handina kupara mhosva kuna Mwari nokuvanhu. 17 Naizvozvo pashure pemakore mazhinji kwazvo ndakasvika kuti ndiuye nezvipo zvokunzwira ngoni kurudzi rwangu, nezvinopiwa.+ 18 Pandakanga ndiri pazvinhu izvi vakandiwana ndiri mutemberi ndakachena sezvinodiwa netsika,+ asi ndisina boka revanhu kana kuti paine mheremhere. Asi kwakanga kuine vamwe vaJudha vaibva muruwa rweEzhiya, 19 vanofanira kuva varipo pamberi penyu kuti vandipomere kana vangava nechimwe chinhu chokundipomera.+ 20 Kana kuti, varume vari pano ngavazvitaurire voga chinhu chakaipa chavakawana zvandakamira pamberi peSanihedrini, 21 kunze kwokutaura kumwe chete kwandakashevedzera ndakamira pakati pavo ndichiti, ‘Nhasi ndiri kutongwa pamberi penyu nokuda kwokumuka kwevakafa!’”+ 22 Zvisinei, Ferikisi,+ achiziva zvakarurama kwazvo nyaya dzine chokuita neNzira iyi,+ akatanga kumbomisa varume vacho achiti: “Kana Risiyasi+ mutungamiriri wehondo angosvika kuno, ndichasarudza pamusoro penyaya idzi dzine chokuita nemi.” 23 Akarayira mukuru weuto kuti murume wacho achengetwe uye ave norusununguko rwakati kuti pakuva musungwa, uye kuti arege kudzivisa chero ani zvake wevanhu vake kumushumira.+ 24 Kwapera mazuva akati Ferikisi+ akasvika nomudzimai wake Drusira, akanga ari muJudha,+ uye akashevedza Pauro akamunzwa nezvokutenda muna Kristu Jesu.+ 25 Asi zvaaitaura pamusoro pokururama+ nokuzvidzora+ uye kutongwa+ kwaizouya, Ferikisi akatya, akati: “Panguva ino enda hako, asi kana ndawana nguva yakakodzera ndichakushevedzazve.” 26 Panguva iyoyowo, zvisinei, akanga achitarisira kuti apiwe mari+ naPauro. Nokuda kwaizvozvo akatomushevedza kazhinji achikurukura naye.+ 27 Asi, makore maviri paakapera, Ferikisi akatsiviwa naPokiyo Festo; uye nokuti Ferikisi aida kunzi akanaka+ nevaJudha akasiya Pauro akasungwa.